Moments leh saaxiibo 55
Waa maxay dareenka urta; sidee bay u dhaqmaan? samee qayb ka mid ah jirka oo ku lug leh soo saarista dareemaha, iyo qaybkee ayaa urta cayaarta ku noolaanshaha?
Waxa loo yaqaanno urin, waa fahamka astaamaha qaarkood ee ashyaa'da. Guryahaasi waxay ku dul shaqeeyaan qofka iyada oo loo marayo xubinta taranka, halkaas oo ay ka gaadhaan dareemayaasha. Neerfayaasha waxay u gudbiyaan sheyga khiyaamada ah, oo ku jira shayga jirka, hay'ad ku jirta jidhka aadanaha. Hay'addani waa waxa lagu garto nooca shayga iyada oo loo marayo macluumaadka ay ka hesho iyada oo ku jirta dareemayaasha urta. Jiritaanku waa aasaasi, jinni dabiici ah oo ka mid ah jinniyada dhulka. Uumiga urta ayaa ku xidhan oo waa mid ka mid ah noolasha gala dastuurka iyo qaab dhismeedka aasaasiga ah ee aadanaha. Uumiga urta ayaa ah astaamaha dhulka, sababtaas darteedna wuxuu u arki karaa astaamaha dabeecadda dhulka, oo lagu muujiyey walxaha jirka. Haddaba jawaabta su’aalaha “Waa maxay dareenka urka iyo sidee u dhaqmaa?” Waa in ay tahay abuur, aasaasi aasaasi ah gudaha jirka bini aadamka, taas oo urisa dareenka aasaasiga ah ee dabeecadaha gaar ahaaneed ee jirka. jirka, oo loo yaqaanno ur ama ur.
Sifooyinkaasi waxaa lagu gartaa kaliya marka la urayo. Urta ayaa ah tan aasaasiga ah oo dhan. Urta ayaa ah cunnadeeda, oo quudisa oo sii wadata. Waxay gartaa astaamo gaar ah iyo xaalado ka mid ah waxyaabaha dhulka ka baxsan. Urta ayaa ah waxyaabaha aan la arki karin, ee dhulka hoostiisa, ee gala dastuurka u kufaadinta aasaasiga ah ee jirka iyo bina aadamka.
Walxaha jirka ee shayga oo ay urta ka dareemaan urrurku waxay galaan soosaarka dareenka urta. Kaliya ma aha walxahaas oo iska lahaa sheygii jir ahaanta laakiin sidoo kale walxaha noocan oo kale ah ee dhulka sida ku soo dhex dhacay shayga, ayaa sababa dareenka urka. Cilmiga dhulku waa sida biyo la mid ah oo kale, oo dib iyo dib ugu sii dhex wareegaya sheyga. Qulqulka qulqulka wuxuu ka kooban yahay cabbir aan dhamaad lahayn, oo ah waxyaalo aan muuqan oo u muuqda inay yihiin tiro wadarta ah; laakiin haddii dareenka gudaha ee araggu uu kufilan yahay oo maskaxdu ay falanqayn karto qulqulka, socodkaas ayaa loo arkaa inuu ka kooban yahay walxaha walaxda ah.
Marka jawiga jireed ee qofku uu la xiriiro jawiga jireed ee sheyga uu urta ka dhasho - jawigaas oo ka samaysan maaddada qiiqaya ee ku xusan - walxahaas waxaa lagu gartaa jawiga sigaarka, markay la xiriiraan dareemayaasha urta. Urta waa sifaha jirka u gaarka ah ee walxaha la arko. Shay kasta oo jireed wuxuu leeyahay jawi jireed oo u gooni ah, taas oo ka kooban walxaha la hakiyay iyo wareejinaya. Laakiin walxaha yaryar waa la ururin karaa. Sababta ayaa ah in aragtida dareenka urta aan la tababarin oo aan fiicnayn. Markii dareenka urta la tababbarayo, sida kuwa indhaha la ', waxyaabo badan ayaa la urin karaa oo hada guud ahaan loo tixgeliyaa inay yihiin ur aan urin.
Weli waxaa jira dareen wanaagsan oo ur ah, dareen gudaha ah, oo laga yaabo inuu horumaro oo dadka qaar ay horayba u soo barteen, taasoo lagu uran karo urka waxyaabaha aan jirka aheyn. Waxyaabaha loo yaqaan 'Noings of dun kale' waxaa laga yaabaa inay naftooda ku ogaadaan ur, laakiin kani maahan wax jir ah.
Qaybta ay kareyso urta ayaa ku dheehan nolosha waa in urinta aaladda urta hagaajinta nolosha. Urta cuntadu waxay keentaa in cabitaannada caloosha ay ku qulqulaan oo ay kiciyaan iyaga, sidoo kale aragtida miis si fiican loo diyaariyey. Xayawaanku waxay ku ogaadaan dareenkooda meelaha urta ah halkaasoo ay ka heli karaan cunto. Waxay ku ogaadaan jiritaanka cadowga iyo qatarta urka.
In kasta oo qofku wakhtigan lagu quudiyo nuugista nuxurka khiyaanada ah ee nidaamkiisu ka qaadanayo cuntada guud ee uu cuno, mustaqbalku wuu sii socon doonaa, markii uu qofku si fiican u xakameeyo jirkiisa jidh ahaaneed, suurta gal bay u tahay isaga inuu soo saaro dareenka urta nuxurka uu hadda leeyahay si uu uga helo dheefshiidka isbadelka cuntada jireed. Ubadka udgoonkiisa ayaa markaa lagu soo oogi doonaa inuu nafaqeeyo jidhka jidhka. Labada dareen ee dhadhanka iyo urta ayaa, si kastaba ha ahaatee, waa in si weyn looga beddelaa xaaladaha ay ku sugan yihiin hadda kahor nafaqada iyadoo keliya ay suurta gal tahay. Kadib waxayarooyinka jirka ee khiyaanada leh ee uu nuugo doono urinta udugga waxay noqon doontaa habka lagu kobcinayo jirka jirka.
Waa maxay fikradda? Sidee loo soo saari karaa oo loo isticmaali karaa?
Maskaxdintu waa gobolka maskaxda ee muuqaalka maskaxda ee maskaxdu ku shaqayso si kumeel gaar ah si ay u siiso mowduuca fikirka kaas oo kulliyadda ujeeddadu ku ayday iyo kulliyadda xallinta ay soo gelisay oo ay ku dhex leedahay tiro baaxad leh. Saddexda awoodood ee maskaxdu si toos ah ayey ula xidhiidhaan mala-awaalka. Afarta kulliyadood ee kale ayaa si aan toos ahayn uga walaacsanahay. Kuliyadda mugdiga ahi waxay faragalin ku abuurtaa mala-awaalka, sida ay ku shaqayso shaqo kasta oo kale oo maskaxda ah, sidaa darteedna kulliyadda mugdigu waa inay kujirtaa xaalad ay ku filan tahay loo maamuli karo shaqada mala-awaalka. Waqtiga kuliyadu waxay soo saartaa sheyga loo isticmaalo shaqada male awaalka. Kulliyada iftiinka waxay muujineysaa sida shaqada mala-awaalka loo sameeyo. Kuliyada I-am waxay siisaa aqoonsi iyo shaqsiyaad shaqsi mala-awaal ah. Imaamku waa xaalad maskaxeed, iskeedna maaha dareenka. Shaqada mala awaalka ah waxaa lagu sameeyaa maskaxda kahor intaysan laxiririn dareenka maskaxda iyo kahor inta aan caqliga loo yeerin inuu muujiyo muuqaalka aduunka muuqaalka wixii markii hore lagu sameeyay mala awaalka. Tani waa kiiska mala-awaalka. Si kastaba ha noqotee, waa in maskaxda lagu soo qaado in waxa sida caadiga ah loogu yeedho khayaalku dhab ahaan maahan male-awaal. Waa maxay ballaadhan iyo faham la'aan macnaha erayga loo yaqaan mala-awaalku waa ciyaar maskaxda ku qabta dareenka, ama, heer sare, shaqada maskaxda marka lagu qasbo dareenka inuu soo saaro ama keeno waxyaalaha siiso farxad dareenka iyo inaad siiso raaxooyin cusub ama dhibaatooyin kuwaas oo caqligu muujiyey oo maskaxda u horseeday. Xaaladda xaaladdan, oo ah been abuur loo malaynayo mala-awaal, dhammaan toddobada kulliyadood ee maanka waxay ku xanaaqsan yihiin kuliyadda xallinta; laakiin isku-darka kuwanu waa ka reebitaan ee kulliyadaha kale iyada oo loo marayo kuliyadda xallinta mana aha shaqada kulliyadaha. Kuliyadda xallinta waa kuliyada kaliya ee maskaxda taas oo toos ula xiriirta maskaxda ninka celceliska. Lixda kulliyadood ee kale wax xiriir ah lama leh. Ficilladooda waxaa lagu keenay iyada oo loo marayo kulliyadda xallinta.
Si aad si fiican ugu fahanto waxa khayaali ah - taasi waa, mala-awaalka dhabta ah — waa, waa in la arkaa waxa khayaali ah ee beenta ah - taasi waa, kacsanaanta kaliya ee loo yaqaan khayaali-waa. Fikradda beenta ah ma ahan ficil miyir-qabka ah ee kulliyadaha maskaxda, laakiin waa ficil hal kulliyadeed, kulliyadda xallinta oo keliya, taasoo kicisa dareenka oo marka ay xanaaqdo ay keento xanaaq qasab ah ee lixda kulliyadood ee kale ama qaar ka mid ah.
Xanta, riyooyinka maalinta, dayaxa, ma ahan male awaal. Dib-u-soo-saarka qaababka iyo qaababka dabeecadda ma ahan male-awaal. Nuqul ka mid ah shaqo kasta, ha ahaato dabeecadda ama ha ahaadee, ma aha male awaal, sikastaba ha ahaatee waa loo qaban karaa. Imaamku waa abuuritaan. Shaqo kasta oo mala awaal ah waa abuuritaan cusub. Imaamku ma koobiyeysto dabeecadda. Dabeecaddu ma muujiso maskaxda sida loo sameeyo shaqada khayaaliga. Imaamku wuxuu siiyaa dabeecadda qaababkeeda iyo midabkeeda iyo codkeeda iyo qeybaheeda kala duwan. Kuwani waxaa loo habeeyey dabiiciyan maanka mana aha dabeecadda.
Si loo beero mala-awaal - taasi waa, maskaxda maskaxda ee kuliyada muuqaalka, kulliyadda ujeeddadeedu tahay, iyo kuliyadda xallinta ay isku dubbaridan tahay oo ay fuliso shaqadooda si wada jir ah, halka kulliyadda mugdigu ay xadidan tahay ama xakamayso, iyo saddexda kulliyadood ee kale , kuliyada kulliyada, kuliyada fudud, iyo kuliyada I-am waxay gacan ka geystaan ​​shaqadan –waxaa lagama maarmaan ah in la fahmo nidaamka halkan ku xusan, kaas oo ah nidaamka kaliya ee siiya fahanka howlgalada maskaxda.
Tallaabada labaad waa in la awoodo in la fahmo mawduuc fikir ah, tallaabada xigta waa in lagu tababaro kulliyadda muuqaalka iyada oo la waafajinayo macallimiinta ujeeddada iyo xoogga la saarayo. Weydiiyaha ayaa loo gudbiyaa labada maqaal ee ku saabsan mala-awaalka kuwaas oo ka soo muuqday qodobbada Maajo iyo Juun ee erayga WORD, ee 1913. Xagga awoodaha maskaxda, macluumaad ayaa laga heli karaa maqaalka, "Adepts, Masters, iyo Mahatmas,"� printed in THE WORD inAbriil, Laga yaabaa, Juun, July, iyo Agoosto, 1910.